नेपाली अवार्डः भित्री खोक्रो बाहिर बोक्रो – An Online Entertainment News Portal
HomeEventनेपाली अवार्डः भित्री खोक्रो बाहिर बोक्रो
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपालमा गरिने अवार्ड समारोहमा कलाकार पुगे भने अचम्म नै मान्दा हुन्छ । किनकी, अहिले कलाकारका लागि वितृष्णा बनेको छ अवार्ड । मनपरी अवार्ड वितरण हुँदा कलाकारले पनि अवार्डबाट दुरी नै बनाउने सोच बनाएका छन् ।
शनिबार आयोजित चौथो कामना फिल्म अवार्डमा पनि यो रोग देखियो । कामना अवार्ड बाहिरी रुपमा जती तामझामका साथ आयोजना भएको थियो, यसको भित्री गुँदी त्यती नै खोक्रो थियो । पहिलो कुरा त अवार्ड पाउने धेरैले नै अवार्ड लिन पुगेनन् । उत्कृष्ट नव अभिनेता, उत्कृष्ट निर्देशक, उत्कृष्ट सह अभिनेत्री लगायत धेरै विधामा अवार्ड लिन पुगेनन् । सुरुवातको ५ वटा विधामा त अवार्ड लिन जाने नै स्टेजमा नहुँदा आयोजकले अवार्ड घरमै पुर्याउने बताइरहेको थियो । कार्यक्रम संचालकले प्राविधिकहरु व्यस्त छन् भनेर अवार्डको लाज ढाकिरहेका थिए ।
अवार्ड समारोहमा पुग्ने कलाकारको उपस्थिती पनि हेर्नलायक नै थियो । अभिनेता अनमोल केसी अवार्डको मध्य भागमा पुगे र एकैछिनमा उनले अवार्ड पाए । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई स्टार अफ द एयर दिइएको थियो । अवार्डको घोषणा भएपछि मात्र प्रियंका आयुष्मानसँग कार्यक्रममा प्रवेश गरेकी थिइन् । आयोजकले अवार्ड दिने पक्का हो आउनुहोस् भनेपछि मात्र उनी पुगेको जस्तो देखियो ।
अवार्डको मुख्य विधा पनि विवादित बन्यो । किनकी, औषत व्यापार गरेको र निर्देशकिय पाटोमा समेत कमजोर देखिएको लिलिबिली फिल्मले मुख्य अवार्ड जित्यो । उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जित्नका लागि लिलिबिली भन्दा अन्य सिनेमा लायक थिएनन् होला ? किनकी, पटकथा र संवादको विधामा शत्रु गतेले अवार्ड पाएको थियो । पटकथा, संवाद, हिरो, हिरोइन सबैबाट पछारिएको फिल्म कसरी उत्कृष्ट फिल्म बन्यो र त्यो फिल्मका निर्देशक कसरी उत्कृष्ट निर्देशक बने होलान् भन्ने बहस हलमा चलेको थियो ।
अभिनेता अनमोल केसीले कृ सिनेमाबाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जिते । तर, अनमोल अवार्ड लिन स्टेजमा चढ्नु अगावै ठूलो लाइट बलेको थियो । फिल्म ए मेरो हजुर ३ को छायांकनका लागि लाइट बालियो । आयोजकसँग पहिले नै कुरा मिलाएर अनमोललाई अवार्ड दिएर फिल्मको दृश्य छायांकन त गरिएको होइन भन्ने बहस पनि अवार्डपछि चलेको थियो ।
अवार्डमा समावेश गरिएका प्रस्तुतिहरुले दर्शकको मन जितेका हुन् । तर, अवार्ड किन र केका लागि गर्ने ? मनोरञ्जनका लागि मात्र कि सर्जकलाई सम्मान पनि गर्न । अवार्डको मुख्य गुँदीमै चुकेर अरु तामझाम धेरै गर्नुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले बलिउडमा पनि अवार्ड कसले पायो भन्ने क्रेज हराउँदै गएको छ । नेपाली अवार्डमा पनि यस्तै खालको समस्या सुरु भएको छ । कामना फिल्म अवार्ड पनि यी कुराहरुबाट चुकेन ।
यस्तो छ अवार्डको सुचि :–
उत्कृष्ट चलचित्र : लिलिबिली
उत्कृष्ट निर्देशक: मिल​न​ चाम्स​ – लिलिबिली
उत्कृष्ट नव-निर्देशक: दीपेन्द्र लामा – घामपानी
उत्कृष्ट अभिनेता: अनमोल केसी – कृ
उत्कृष्ट अभिनेत्री: बेनिशा हमाल – ब्लाइन्ड रक्स
स्टार​ अफ​ द ईय​र​: प्रियंका कार्की
उत्कृष्ट नव-अभिनेता: आशिर​मान​ देश​राज​ जोशी – ग्याङ्ग​स्ट​र​ ब्लुज
उत्कृष्ट नव-अभिनेत्री: जसिता गुरुङ – लिलिबिली
उत्कृष्ट सह-अभिनेता: शिव​ह​री पौडेल ​- श​त्रुग​ते
उत्कृष्ट सह-अभिनेत्री: वर्षा राउत – छक्का पञ्जा २
उत्कृष्ट खलपात्र​: र​मेश​ र​ञ्ज​न​ झा – श​त्रुग​ते
उत्कृष्ट हास्य कलाकार: राजाराम पौडेल – म यस्तो गीत गाउँछु
उत्कृष्ट बालकलाकार: कुशाग्र भट्टराई – पिंजडा ब्याक अगेन
उत्कृष्ट कथा: दीपेन्द्र लामा – घामपानी
उत्कृष्ट पटकथा: दीपकराज गिरी/प्रदीप भट्टराई – श​त्रुग​ते
उत्कृष्ट संवाद: हरिवंश आचार्य/प्रदीप भट्टराई – श​त्रुग​ते
उत्कृष्ट गीतकार: धिरेन्द्र प्रेमर्षी – ‘सम्झनाको सारंगी’ – संरक्षण
उत्कृष्ट संगीतकार: अर्जुन पोखरेल – ‘तिमी रोएको पल’ – ऐश्वर्य
उत्कृष्ट पार्श्वगायक: सुगम पोखरेल – तिमी रोएको पल/ऐश्वर्य
उत्कृष्ट पार्श्वगायिका: बानिका प्रधान – ‘उड्यो मन’ – ब्लाइन्ड रक्स
उत्कृष्ट नृत्य-निर्देशक: कविराज गहतराज – ‘कुटुमा कुटु’ – दुई रुपैयाँ
उत्कृष्ट द्वन्द-निर्देशक: हिमाल केसी – पिजंडा ब्याक अगेन
उत्कृष्ट छायाँकन: पुरुषोत्तम प्रधान – कृ
उत्कृष्ट सम्पादन: सुरेन्द्र पौडेल – कृ
उत्कृष्ट पार्श्वसंगीत: एलिष कार्की – लिलिबिली
उत्कृष्ट ध्वनी मिश्रण: मुकेष शाह – लिलिबिली
उत्कृष्ट श्रृंगार: शंकर थापा – घामपानी
अभिनेता: र​मेश​ बुढाथोकी – भुईमान्छे
​खलपात्र: सुनिल​ थापा – शेर​ ब​हादुर​
ब​र्ष​ थिएट​र​: बिरेन्द्र​ ह​माल​ – माला आर्ट​
नेपालकी श्रृंखलालाई हराइन सिंगापुरकी भानेसाले, माफी माग्दै श्रृंखलाले गरिन यस्तो भिडियो पोस्ट !
September 23, 2018 sutraentertainment Gossip, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – हिरो प्रदिप खड्काको माग बढ्दो छ । तर, माग बढ्दा त्यसलाई सम्हाल्न आवश्यक छ । सम्हाल्न सकिएन भने स्टारडम लामो समय नटिक्न पनि सक्छ । अभिनेता प्रदिप खड्कामाथि लगानी गर्न चाहने निर्माता […]
फिल्म ‘ब्याचलर बन्टी’ बन्ने भएको छ । राजधानी स्थित एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्म निर्माण टिमले ‘ब्याचलर बन्टी’ बन्ने औपचारिक घोषणा गरेको हो । सुदिप खड्का प्रोडक्सन र चाम्स इम्टरटेमेन्टको ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्म ‘ब्याचलर […]